Fiomanana ho an'ny zavamaniry | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fiomanana ho an'ny zavamaniry
Fiompiana karazam-boaloboka: fiarovana ny fijinjana ho avy
Samy nanandrana voaloboka izahay tsirairay avy, ary ny olona sasany dia tia azy io ka nanapa-kevitra ny hitombo izany. Nefa ny voaloboka dia tsy misy afa-tsy ny asa. Rehefa avy nijinja ianao, dia mila manondraka ny kirihitr'ireo voaloboka ianao, mamaha ny tany eo ambany mason'izy ireo ary mampihatra vongana. Ary mba hiarovana ny voaloboka amin'ny aretina, amin'ny fotoam-pijinjana dia manamboatra ny voalobony amin'ny fanomanana simika.
Ahoana ny fampiharana "Topaz": ny famaritana sy ny fananana ny zava-mahadomelina
Ny areti-nify dia mampidi-doza amin'ny zavamaniry rehetra, manomboka amin'ny zavamaniry any amin'ny toeram-pambolena. Amin'ny tranga toy izany, ny mpanampy mahomby indrindra ho an'ny mpamboly sy ny florist dia ny Topaza foka, Topaz ny fampiasana izay ho hitanao ao amin'ilay lahatsoratra etsy ambany. "Topaz": famaritana ny zava-mahadomelina Ny fitsaboana "Topaz" dia anisan'ireo fungicides - vovoka izay afaka mamotika sy tsy mamela ny fivoaran'ny spores sy ny mycelium ao amin'ny valan'aretina.
Ny bactericide biolojika "Gamar", fomba ahoana no handavana sy hampihatra tablet (boky)
Ao amin'ny fanasokajiana pestisides, bakterisides dia atolotra amin'ny karazana fanafody samihafa, saingy na dia eo aza izany, dia izy ireo dia anisan'ireo mpanakanto fungicidal izay mampiaraka ny antibakteria sy ny antifungo. Ny bakterisides dia ampiasaina hamonoana otrikaretina bakteria sy fivalozana ao amin'ny tany sy amin'ny zavamaniry.
"Kornevin": famaritana sy torolàlana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina
Amin'ny vanim-potoanan'ny fampandrosoana ny teknolojia, tsy mihetsika ny fiompiana fambolena voninkazo, voankazo ary voankazo. Mba hampitombo haingana ny karazam-bary tsy fahita firy, matetika isika no manamboatra ny fomba famotehana, na izany aza, araka ny fantatra, fa tsy ny fikajiana rehetra no fototry. Avy eo isika dia miatrika ny tanjon'ny fomba hamporisihana ny fitomboan'ny fiorenana mba hahazoana 100% ny tahan'ny fahaveloman'ny seedlings.
Ahoana ny fampiasana ny "Home" zava-mahadomelina amin'ny aretina voatabia, cucumbers sy ovy
Ny zava-mahadomelina manokana - fungicides - dia tena tsara amin'ny ady amin'ny aretin'ny pilina. Ny iray amin'ireo mahomby indrindra amin'izy ireo dia ny "zava-mahadomelina". Ampiasaina ao amin'ny zaridaina, zaridaina, lobaka. Saingy ny zava-mahadomelina dia tsy manimba ireo zavamaniry, zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba handavana ny "Hom" amin'ny famafazana sy ny fomba ampiasana azy tsara.
Ny fitomboan'ny fambolena "Etamon": torolàlana ampiasaina
Tao anatin'izay taona vitsivitsy izay dia lasa malaza amin'ny mponin'ny fahavaratra, mpamboly ary mpankafy tsotra ao amin'ny trano fivoahana trano ny mpandidy sy ny fitomboan'ny fitomboan'ny zavamaniry. Aorian'izay dia hodinihintsika amin'ny antsipiriany ny iray amin'izy ireo, dia ny "Etamon". Andao ho fantatsika hoe inona io zava-mahadomelina io ary ny hampiasana izany. Fantatrao ve? Ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny zavamaniry dia antsoina hoe phytohormones ary novokarin'ny zavamaniry vitsy kely.
Ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny zavamaniry: torolàlana ho an'ny famporisihana ny voninkazo "Bud"
Ny fikarakarana ara-tsakafo, ampiasaina araka ny torolàlana, dia manome valiny tsara. Ireo mpamboly amam-pitaovam-piasa dia nanomboka nampiasa solosaina tsy ela toy izay, saingy mavitrika tokoa. Inona avy ireo fanafody misy ny zava-mahadomelina, ny fiantraikany eo amin'ny zavamaniry sy ny vokatra tsara? Hevero ny ohatra nasehon'ny fanentanana "Bud".
Heteroauxin: famaritana, voka-dratsy, fampiasana
Ny zaridaina tsirairay, na inona na inona mitombo - hazo fihinam-boa, karakaina na voninkazo, dia maniry foana hahita ny vokatry ny asany namboleny. Maro no efa mahalala ny zava-miafina: inona no ilainao hampiharina mba hahatonga ny zavamaniry hamboly tsara sy ho mavitrika amin'ny fitomboana - izany no fototry ny fototarazony, ary ny hétéronuxin izay mifangaro voajanahary mifantoka.
Ahoana ny fampiasana ny fanafody "Fundazol"
Ny fungicide dia fiomanana amin'ny fiarovana sy ny fisorohana ny zavamaniry amin'ny aretin'ny pilina sy bakteria. Ny fanasivanana amin'ny kolontsaina isan-karazany, dia mety hamotika tanteraka ny toerana misy ny fambolena ny holatra, miparitaka amin'ny zavamaniry. Androany, ny tsena dia manana karazana fitsaboana maro samihafa ary sarotra ny mivezivezy izany.
Famaritana feno ny zava-mahadomelina "Immunocytofit" sy torolàlana ampiasaina
Ny fanomanana biolojika Immunocytofit dia ara-boajanahary voajanahary ho an'ny zavamaniry. Mampitombo ny fanoherany amin'ny aretina isan-karazany izany, mampitombo ny fivoarana, mampitombo ny fambolena ary manamaivana ny fiantraikan'ny micro micro organisms. Ny fampahalalana ankapobeny "Immunocytofit" dia vokatra azo avy amin'ny firaisana ara-nofo izay nahita ny fampiharana azy amin'ny fikarakarana voankazo sy zavamaniry, toy ny cucumbers, voatabiha sy ovy, ary koa karazana masomboly.
Fanafody "Ecosil": torolàlana ampiasaina amin'ny fanodinana
Ho an'ireo zavamaniry voadonan'ny aretina sy ny toetr'andro sy ny teknikan'ny fambolena tsy manjary, Ecosil dia fiotazam-boankazo izay manome hery sy filaminana. Ahoana ny fomba hamonjena ireo zavamaniry "Ecosil" ao amin'ny zaridaina, ao an-jaridaina sy ny zaridaina, izay zaran'ireo mpamboly sy zaridaina ao amin'ny fanamarihana, ary nahoana no ity medikaly manokana ity no horesahina.
Ny zava-mahadomelina "Tiovit Jet": torolàlana ampiasaina
Ny fambolena, ny voankazo ary ny voankazo dia tsy mitaky fikarakarana, fa fiarovana amin'ny karazana aretina sy tsiro. Ny mpamboly manampahaizana mahomby amin'ity orinasa ity dia ny "Tiovit Jet" - fifindrana fungicide amin'ny vokatra isan-karazany. Hodinihina amin'ny antsipiriany kokoa ny endrik'io fitaovana io. "Tiovit Jet": ny votoaty mavitrika sy ny endriky ny famotsorana "Tiovit Jet" dia nametraka ny tenany ho mpiaro ny zavamaniry voaaro amin'ny aretina sy ny bibikely.
"Acrobat TOP" mifangaro fialokaloka: torolàlana ampiasaina
Mampalahelo fa matetika ny mpamboly sy ny mpamboly dia miatrika aretina isan-karazany, izay mampihena ny vokatra, na miteraka fahafatesana mihitsy aza. Ny mpanamboatra ny fungicide isan-taona dia manolotra ny fivoaran-draharaha vaovao, natao mba handresena ny aretina amin'ny fotoana fohy. Ny iray amin'ireo zava-mahadomelina ireo dia ny fonosana ara-toekarena roa eo an-toerana "Acrobat TOP", novolavolain'ny BASF.
Fandefasana fungicida sy torolàlana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina "Albite"
"Albit" ao amin'ny mpiompy trano, zaridaina ary mpamafy dia zava-mahadomelina tena ilaina. Manoro hevitra azy ireo ny mpamboly mba hamerenana ny zavamaniry aorian'ny fiatrehana herbicide, ny hain-tany maharitra, vokatry ny fahasimbana, ny fanatsarana ny fikajiana ny voa, ny fambolena tsara ary ny fanoherana ireo karazana pesta samihafa.
Fungicide "Horus": torolàlana ampiasaina
Mba hiantohana ny fiotazana tsara ao amin'ny zaridaina na saha, dia tokony hokarakaraina ny zavamaniry mety ho mora simban'ny aretina sy ny bibikely. Ny ady amin'ny aretina dia namolavola fitaovana sy zava-mahadomelina maro. Ao amin'ny tsenantsika dia afaka mahita ilay zava-mahadomelina vaovao "Horus", izay efa nahavita ny fanajana ny zaridaina sy ny zaridaina.
Azo atao ve ny mampiasa ny fôsigidy "DNOC" ho an'ny zaridaina sy ny zaridaina?
Ny tompon'ny tany dia manana olana maro. Ny fanimbana sy ny aretina isan-karazany dia tena manorisory azy ireo indrindra - voamarika fa isan-taona dia lasa manohitra kokoa ny vahaolana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana ry zareo. Noho izany dia tsy maintsy maka endrika matanjaka (azo antoka). Diniho ny iray amin'ireto fitaovana ireto, mianatra bebe kokoa momba ny zava-mahadomelina antsoina hoe "DNOC" sy ny fampiasana azy.
Ny vaovao iray izay mendrika ny mijery dia ny Raspberry Rhapsody Tomato: famaritana karazana
Ny fomba hambolena sy fikarakarana ravina fody
Ny karazany isan-karazany amin'ny anarana ara-panahy - ny voaloboka "Vanyusha"
Ny endriky ny fikarakarana sy ny olan'ny fampiroboroboana zavamaniry mavomavo ho an'ny tany malalaka - mibaribary tsara ny verbena
Potato "Zhuravinka": famaritana, indrindra ny fambolena
Tersk Tersk: toetra, fampiharana
Inona avy ireo trondro goavam-be misy varahina?
Lapoaly mitandrina ny fahadiovana
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fiomanana ho an'ny zavamaniry